सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू Dec 13, 2017 1:04 PM
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेभन्दा विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संसदबाट पारित भएपछि पुराना बैंकर शशिन जोशीले टिप्पणी गरे- नेपालमा पनि क्रोनी क्यापिटालिजम् झ्यागिँन थालेको छ। चिसो साँझमा भेटिएका जोशीले क्रोनी क्यापिटालिजम् बारेमा लामो व्याख्या गरेनन् तर
चीनको ‘उदार अर्थतन्त्र’ माथि फेरि उठ्यो अमेरिकी औंला, किन लाग्यो डब्लुटिओमाथि प्रश्नचिन्ह!
डग्लस बुलोच/फोर्ब्स Dec 11, 2017 1:43 PM
चीनको खुला बजार अर्थतन्त्र अर्थात उदार अर्थतन्त्र फेरि बिवादमा परेको छ। १६ वर्षअघि बिश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा आबद्ध भएपनि त्यसअनुसार खुला बजार नीति कार्यान्वयन नगरेको आरोप खेप्दै आएको चीनलार्इ हालै एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले खुलेरै चुनौती दिएका छन्।
हरिकृष्ण जोशी Jul 5, 2017 12:45 PM
मानीसको स्वभाव अनुसारनै अनगिन्ती इच्छा र चाहाना हुन्छन्। चाहे जागीरमा होस् या विद्यार्थी जीवन, खेलकुदमा होस् या ब्यापार ब्यवसायमा, हरेक क्षेत्रमा अगाडी नै बढ्ने चाहना हुन्छ। तर, हामी आफ्ना चाहाना
दि इकोनोमिस्ट Mar 7, 2017 10:36 AM
शहरहरु कंक्रिटको जंगलजस्ता हुँदैछन् । एकनासका शैली पछ्याएर बनाइएका आधुनिक घरहरु आत्माविहीन झैं लाग्छन् । घर जीवन्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका केही आर्किटेक्टहरुले यस्ता डिजाइन पनि कोरेका छन् जसले घरलार्इ आकर्षक
प्रभात भट्टराई/बिजमाण्डू Nov 7, 2016 9:42 AM
काठमाडौँ । गत बर्ष तिहारको मुखमा गोरखापत्रमा सूचना आयो- 'दिपावलीको बेला माग अनुसार बिद्युत आपुर्ती गर्न नसकिने हुँदा उपभोक्ताले झिलिमिली बत्ति नबालिदिनु होला।' अन्तिममा सूचना निकाल्ने निकायको नाम लेखिएको थियो- नेपाल विद्युत प्राधिकरण। प्राधिकरण, यस्तो निकाय जसलाई मुलुकमा विद्युत आपूर्तिको एकाधिकार छ। बिजुली
विज्ञान अधिकारी/बिजमाण्डू Oct 6, 2016 9:57 AM
वैशाख २०७२ को भयानक भुकम्प। भुकम्पका परकम्पनले काठमाडौंमा झड्का दिंदै गर्दा साउनमा उप्पल मजुमदार होटल सोल्टीको महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका थिए। उप्पल, ५० वर्ष पुरानो होटल सोल्टीमा भुकम्पको झट्कालाई पार लगाउनका लागि सम्भावनाहरु खोज्दै
विज्ञान अधिकारी/बिजमाण्डू Sep 20, 2016 10:26 AM
नेपालको पुरानो व्यवसायिक घरानामध्ये एक इन्द्रभक्त श्रेष्ठका दुई छोरा छन्, जेठा भारतभक्त श्रेष्ठ कान्छा रविभक्त श्रेष्ठ। कान्छा रविभक्तले भारतीय ज्वाइन्टभेञ्चर युनिलिभरमा साझेदारी गरेका छन्। जुन कम्पनीको सेयर नेपालको स्टक बजारमा सबैभन्दा महँगो मूल्यमा खरिद बिक्री हुन्छ। रविभक्त होटल सोल्टीमा साझेदार छन्।
प्रभात भट्टाराई/बिजमाण्डू Sep 15, 2016 10:27 AM
काठमाडौं। १२ बर्ष अघि, जति बेला काठमाडौँबाट दक्षिणकाली, सिस्नेरी हुँदै हेटौँडा जाने बाटो खुलेको त थियो तर निजी गाडी मात्र गुड्थे। बीचमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना पर्ने हुँदा त्यो बाटो भएर गुड्नेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो। प्रविण खतिवडाले विरगञ्जस्थित सिप्रदी
विल गेट्सलाई उछिन्दै दुई दिनका लागि विश्वकै सर्वाधिक धनाढ्य बने यी कपडा व्यवसायी
एजेन्सी Sep 11, 2016 3:54 PM
विश्वका धनाढ्यको कुरा हुँदा विल गेट्स पछि धेरैले तुरुन्त सम्झिने नाम हो वारेन वफेट। त्यसपछी कार्लोस स्लिम हेलु हुँदै उदाउँदा धनाढ्य मार्कजुगर वर्ग धेरैको जिब्रोमा सजिलै आउँछन्। यो सूचीको अग्र भागमानै रहेको एक बृद्ध भने खासै 'नोटिस' हुँदैनन्। उनी हुन् एमान्सिओ
अर्वपतिको सूची सार्वजनिक गर्ने फोब्सका अनुसार भारतका वारेन बुफेट भनेर चिनिने राकेश झुनझुनवालासँग दुई अर्व दश करोड डलर(दुई खर्व २० अर्व रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ती छ। भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार
VIEW ALL NEWS FROM SUNDAY
कुमारी बैंकको अध्यक्षमा अमिरप्रताप राणा चयन, अरु संचालक को को चुनिए?
काठमाडौं।कुमारी बैंकको अध्यक्षमा अमिरप्रताप राणा चयन भएका छन्।बैंकको गत
:- सन् २०१० मा जुम्लामा एडिबीले सानो परियोजनाका निम्ति सहयोग गर्यो। एडिबीका निम्ति त्यो खासै महत्वको परियोजना थिएन। एडिबीले त्यस ठाउँका महिलाहरुले घाँसदाउरा गर्ने ठाउँमा सानो बाटो र पुल बनाइदिएको थियो। पछि यही परियोजना हेर्न जाँदा विनितालाई फूलको
पुरै बजेट खर्च भए पनि ऋणको माग धान्ने तरलता उपालब्ध हुँदैन, सुनिल केसीको बिचार
आजको मितिबाट हेर्दा आगामी दिनमा पनि तरलताको अवस्था सहज हुने देखिदैन। बजेट केही विस्तारकारी आएको छ। बृद्ध भत्ता बढेको छ साथै सांसदको पैसा पनि बढेको छ।
काठमाडौं।१५ अर्ब लगानीको सिमेन्ट उद्योग आएपछि धादिङ जिल्लाका सांसदबीच चर्को द्वन्द्व सुरु भएको छ। चिनियाँ संयुक्त लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योग पूर्वाधारको काम अघि बढेपछि सांसदबीच द्वन्द्व सुरु
काठमाडौं। २०६६ पुसमा केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा ऋण लगानी कस्ने निर्देशिका ल्याएपछि जग्गाको संगठित सट्टेबाजी धेरै हदसम्म नियन्त्रण भयो। जग्गा प्लटिङ र बैनामाथि बैनाबाट रातारात धनी हुन
हिजोका सरकारका पालामा जनताले जुन विकृति देखे, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान सावित